तपाईको राशिअनुसार कुन राशिसँग विवाह गर्नु उत्तम हुन्छ ? पढ्नुहोस् | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
प्रत्येक राशिका व्यक्तिहरुको स्वभाव र विशेषताहरु अलग अलग हुन्छन् ।ज्योतीषशास्त्रले कुन राशि भएका व्यक्तिहरु कुन राशिसँग विवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यसको बारेमा वर्णन गरेको छ । आउनुहोस् थाहा पाउनुहोस् तपाईको राशिअनुसार कुन राशिका व्यक्तिसँग विवाह गर्नु उत्तम हुन्छ ।
मेष राशिका मानिसहरु निडर, आत्मविश्वासी, स्वतन्त्र एवम् दृढ संकल्पले भरिपूर्ण हुन्छन् । यदि यिनीहरुले प्रेम गरे भने प्ररा विश्वास र दृढ संकल्पका साथ गर्छन् । उनीहरु आफूले गर्नेजस्तै प्रेम आफ्नो पार्टनरबाट पनि पाइयोस् भन्ने इच्छा राख्छन् । यिनीहरु स्वतन्त्रता मन पराउँछन् । यदि विवाहपछि यो राशि हुनेहरुलाई दबाउने कोसिस गर्नुभयो भने तपाईको सम्बन्ध धेरै टिक्दैन । यिनीहरुको वुश्चिक राशिसँग मेल हुन सक्दैन ।
वृष राशि हुनेहरुले साँचो मनले कसैलाई अपनाए भने जीवनभर धोका दिँदैनन् । तर यिनीहरुलाई पूर्णरुपमा आफ्नो बनाउन सजिलो छैन । यिनीहरु शान्त स्वभावका हुन्छन् त्यसैले रिसाह पार्टनरसँग बस्न सक्दैनन् । वृष राशि हुनेहरुलाई धनु राशि हुनेहरुसँग विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ ।
मिथुन राशिका मानिसहरु हँसि मजाक गर्न मन पराउँछन् । त्यसैले बोरिंग पार्टनर पर्यौ भने सम्बन्ध निभाउन यिनीहरुलाई गाह्रो हुन्छ । यदि तपाईको पार्टनरको राशि मिथुन हो भने तपाई भाग्यमानी हुनुहन्छ किनकि यिनीहरु प्रेममा सच्चा र इमान्दार हुन्छन् । मिथुन राशि हुनेहरुको सम्बन्ध मकर राशि हुनेहरुसँग कहिले पनि सफल हुँदैन ।
कर्कट राशि हुनेहरु प्रेममा परे भने पूरै रुपमा उनीहरुको हुन्छन् । तर जो भावनाहरुलाई पर राखेर आफ्नो बारेमा सोच्ने गर्छन् उनीहरुसँग कर्कट राशि हुनेहरु नातामा बस्न सक्दैनन् । यिनीहरुले गल्तीले पनि कुम्भ राशि हुेनेहरुसँग विवाह गर्नुहुँदैन ।
सिँह राशिका मानिसहरु आकर्षण र आत्मविश्वासले भरिपूर्ण हुन्छन् । यदि वैवाहिक जीवनमा शारीरिक सम्बन्धलाई कायम गर्ने कुरा आउँछ भने यिनीहरु यसमा आफ्नो पार्टनरलाई निराश गर्दैनन् । यिनीहरुको एउटै नकरात्मक कुरा भनेको यिनीहरुको जिद्दिपन हो । यदि यिनीहरुको जिद्दिपनलाई अपनाउन सक्नुभयो भने तपाईको वैवाहिक जीवन सफल हुन्छ ।
यदि तपाई सजिलोसँग तपाईको पार्टनरको आकर्षण चाहनुहुन्छ र उ तपाईप्रति पूर्ण समर्पित होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाई कन्या राशिसँग विवाह नगर्नुहोस् ।किनकि यिनीहरु आफूले सोचेअनुसारको काम गर्छन् । यिनीहरु कसैको लागि मानसम्मान व्यक्त गर्न पछि पर्दैनन् चर कसैले यिनीहरुको आत्मसम्मानमा ठोस पुर्याउने र आफूभन्दा कम देखाउने कोशिस गर्यो भने त्यस्ता व्यक्तिसँग यिनीहरुको सम्बन्ध रहन सम्भव हुँदैन ।
तुला राशिहरु शान्त स्वभावका हुुनुका साथै प्रेममा पूर्णरुपले डुब्ने खालका हुन्छन् । यिनीहरु आफ्ना सबै खालका इच्छा र खुसीहरु बाँड्न चाहन्छन् तर कसैको कन्ट्रोलमा बस्न सक्दैनन् । यिनीहरुले कन्या राशि हुनेहरुसँग विवाह गर्नुहुँदैन किनकि कन्या राशि भएकाहरुले आफ्नो पार्टनरलाई कन्ट्रोलमा राख्ने खालका हुन्छन् ।
प्रेममा डुब्नु अनि आफ्नो प्रेमीको बन्नू यिनीहरुको स्वभाव हो । यिनीहरु जोसँग प्रेम गर्छन्, उसँग छुट्टै संसार बसाउने सपना बुन्छन् । यिनीहरुको मेष राशिसँग मेल हुन सक्दैन, किनकि मेष राशिका मानिसहरु स्वतन्त्र र आफूअनुसार चल्ने हुन्छन् ।
धनु राशिका मानिसहरुलाई वृष राशिका मनिसहरुसँग प्रेम गर्दा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । धनु राशिहरु प्रेमीको लागि सोचाइभन्दा माथि उठेर योजना गर्ने र प्रेमीसँगपनि सोही कुराको चाहना राख्ने खालका हुुन्छन् ।
मकर राशि हुनेहरु आफ्नो प्रेमीले पनि आफ्नो स्वभावको सम्मान गरुन् भन्ने चाहन्छन् । यिनीहरु आफ्नो प्रेमीले भनेको कुरा सजिलै मान्छन् र आफ्नो प्रेमीबाट पनि सोही कुराको चाहना राख्छन् । मकर र कुम्भ राशिबिचको प्रेम सम्बन्ध राम्रो मानिँदैन ।
कुम्भ राशि भएकाहरु आफ्नोे प्रेमीप्रति इमान्दार हुन्छन् र प्रेमीलाई धोका दिँदैनन् । कुम्भ राशि र कर्कट राशिबिचको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन किनकि उनीहरुलाई शंका गर्ने बानी हुन्छ ।
मीन राशिहरु रोमान्टिक हुन्छन् र प्रेम व्यक्त गर्न र निभाउन सिपालु हुन्छन् साथै यिनीहरु कोमल हृदयका पनि हुन्छन् । यिनीहरु कन्या राशि भएकाहरुसँग टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ । – एजेन्सी